လုပ်ငန်းမှာ အမှားတွေကြုံရင် ဘာတွေလုပ်ဆောင်သင့်ပါသလ...
ဘဝဆိုတာ ဘယ်အရာမှ ကြိုခန့်မှန်းလို့ မရပါဘူး။ မိမိအနေနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ လုပ်ငန်းမှာ အရာအားလုံးကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်နေပေမယ့်လည်း၊ တစ်ချိန်ချိန်မှာတော့ လုပ်ငန်းကို ထိခိုက်စေတဲ့အရာတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ လ...
CEO's Message for Chate Sat3years birthday
Today marks the 3rd birthday of Technoholic. It feels just like yesterday and I vividly remember the day I and Shwe Yee moved in to Phandeeyar to kick off our startup idea of gig economy.3year...
Tips for Enriching Your Social Media Content
လတ်တလောမှာတော့ အွန်လိုင်းမှာ အလုပ်စလုပ်မယ့် လုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက် ဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ အမှားလေးတွေကို ပြောပြပေးပြီးပြီဆိုတော့ ဒီတစ်ခါ ဒီဂျစ်တယ် မာကတ်တင်းအပိုင်းမှာ အဓိကလက်နက်တစ်ခုလို ဖြစ်နေတဲ့ social media co...